▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ စွဲလန်းမှုအခြေအနေသည် ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏ အပျော်ရွှင်ဆုံးအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ရတာ တော်တော်ရှုပ်ထွေးတယ်၊ အဲဒါကို အောင်မြင်ဖို့အတွက် မင်းရဲ့လက်နက်အားလုံးကို ထုတ်ပစ်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် သူမကို သင်လည်း ငြင်းပယ်နိုင်ပြီး ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့၊ သင့်အိပ်မက်ထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့တစ်ဝက်ကို မြင်နိုင်စေဖို့ အခြေခံအကြံပြုချက်အချို့နဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ဖန်တီးထားပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
1 မိန်းမတစ်ယောက် မင်းကို ချစ်မိသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1.1 1. အဲဒါကို နားထောင်ပါ။
1.2 2. လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ပါစေ။
1.3 3. မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားအောင် ကောင်းကောင်းဝတ်ပါ။
1.4 4. ဝါကြွားခြင်းမရှိပါနှင့်
1.5 5. အဲဒါကို လျစ်လျူမရှုပါနဲ့။
1.6 6. သူမကို ချစ်မိသွားအောင် ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ပြီးနောက် သူမကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ။
1.7 7. ဖြည်းဖြည်းသွားပါ။
1.8 8. သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို ချစ်စရာကောင်းအောင်ထားပါ။
1.9 9. သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုလမ်းညွှန်ပါ။
1.10 10. မိန်းမတစ်ယောက် မင်းကို ချစ်မိသွားအောင် ရိုမန်တစ်ဆန်ပါ
1.11 11. ၎င်းကို သင့်မိသားစုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါ။
မိန်းမတစ်ယောက် မင်းကို ချစ်မိသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဘယ်အမျိုးသမီးကမှ တခြားသူနဲ့ မတူပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ချိန်းတွေ့ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အခါ အမျိုးသားတော်တော်များများက ကြောက်ကြတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးက ဒါကို သဘောကျနိုင်ပြီး အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သူတို့ ဘယ်လို ပြုမူရမှန်း မသိကြဘူး။
နောက်တစ်ခုကတော့ မင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် အခြေခံ အကြံပြုချက်တချို့ကို ပေးသွားမှာပါ။ မိန်းမတယောက်ကို မင်းကို ချစ်လာအောင်လုပ်။
1. အဲဒါကို နားထောင်ပါ။
အမျိုးသမီးတိုင်း စကားပြောရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ပထမရက်ချိန်းတွင် သင်သည် မရေမတွက်နိုင်သော အကြောင်းအရာများအကြောင်း ပြောဆိုနိုင်ပြီး သူမကို အထူးခံစားစေလိုလျှင် သူမပြောသမျှကို အာရုံစိုက်ပြီး သူမနှင့် စကားပြောဆိုပါ။ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စတင်မှုဖြစ်ပြီး အကြံဥာဏ်များ ဖလှယ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကို ချိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါ သင်သည် ချစ်စရာကောင်းသောမင်းသားဖြစ်သင့်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သင်က ပေးစရာရှိတယ်။ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး စာနာစိတ်ဖြင့် ပြုမူပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူဖြတ်သန်းရန်အတွက် စားသောက်ဆိုင် သို့မဟုတ် ကားတံခါးကိုဖွင့်ပြီး နေ့စွဲအတွင်း ညစ်ညမ်းသောအသုံးအနှုန်းများ သို့မဟုတ် စကားလုံးများကို မသုံးပါနှင့်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့သည် နေရာအပြင်တွင်ရှိပြီး တင်းမာသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနိုင်သောကြောင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ရန်ပင် မစဉ်းစားပါနှင့်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိလာတယ်၊ နင်က စုံတွဲမဟုတ်ဘူး။
3. မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားအောင် ကောင်းကောင်းဝတ်ပါ။
ညစ်ပတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ပြီး အနံ့ဆိုးထွက်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးက သူ့ဘဝရဲ့ ယောက်ျားလို့ ဘယ်မိန်းမမှ တွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ သန့်စင်သောဆံပင် သို့မဟုတ် မွှေးကြိုင်သော မုတ်ဆိတ်မွှေးရှိသော အမျိုးသားများ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတို့ကြောင့် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော အဝတ်အစားများသည် သင်ချစ်မြတ်နိုးသော အမျိုးသမီးထံမှ အမြင်များစွာကို ရရှိစေသော အသေးစိတ်အချက်များဖြစ်သည်။
အလုပ်အကိုင် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ထုတ်ဖော်ပြသလိုသော အမျိုးသားများ ရှိပါသည်။ သင်အနိုင်ယူလိုသော မိန်းမရှေ့တွင် သင်လုပ်သင့်သည့်အရာမဟုတ်ပါ။. သူမသည် သင့်တွင်မရှိသောအရာများအကြောင်းပြောရန်လည်း မလိုလားပေ။
5. အဲဒါကို လျစ်လျူမရှုပါနဲ့။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အမျိုးသမီးကို ရှာတွေ့ပြီး သူ့ကို ချစ်စေချင်ရင်၊ သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် စကားဝိုင်းတွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်။. သူမကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်း ပြောဖို့ကြိုးစားပြီး သူမရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို ထုတ်ပြောလိုက်ပါ။ ကားတွေ၊ ဘောလုံးနဲ့ တခြားအမျိုးသမီးတွေအကြောင်း ပြောရတာ သေချာပေါက် မေးခွန်းထုတ်စရာ မလိုပါဘူး။ သင့်သူငယ်ချင်းများသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းထားနိုင်ပုံကို သိပြီး ဆွေးနွေးရန် မတူညီသော အကြောင်းအရာများ ရှိရန် သေချာပါစေ။
6. သူမကို ချစ်မိသွားအောင် ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ပြီးနောက် သူမကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ။
ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ပြီးတဲ့နေ့မှာ သူ့ကိုဖုန်းဆက်ရင် သူ သင့်ကို ချစ်မိဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီး တိုးလာပါတယ်။. အနှောက်အယှက်မကစားပါနဲ့၊ အဲဒါက အသုံးမဝင်ဘူး။ သူဘယ်လိုနေလဲသိဖို့ သူမကိုခေါ်ပါ၊ သင် သူမနဲ့တွေ့ရတာကို သဘောကျကြောင်း၊ သူမကိုထပ်တွေ့ချင်ကြောင်း ပြောပြပါ။ သူတကယ် မင်းကို ပိုသိစေချင်ရင် ဖိတ်တာကို လက်ခံလိမ့်မယ်။ သူမကို လွှမ်းမိုးမထားပါနဲ့။ ဖုန်း၊ လူမှုကွန်ရက် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ထောင် ရောက်ရှိလာသည့် ဒုတိယရက်အထိ။
အမျိုးသားအများစုသည် ပထမချိန်းတွေ့ပြီးနောက်တွင် ပိုမိုရင်းနှီးမှုတစ်ခုခုဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြသည်။ သို့သော် ပိုမိုရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးတစ်ခုသည် အချိန်၊ လေးစားမှု၊ တာဝန်နှင့် ကတိကဝတ်များ လိုအပ်သည်။ သူမကို အခြားအရာအားလုံးထက် လေးစားပါ။ ဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့သူက ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ တစ်ဖက်လူက အဆိုပြုတဲ့အချိန်ကို လေးစားတယ်။
8. သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို ချစ်စရာကောင်းအောင်ထားပါ။
သင့်သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းကို သိခြင်းသည် ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုနီးပါးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထံမှ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် နှစ်သက်မှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါက သူမအတွက် အရမ်းအရေးကြီးတာမို့ ယဉ်ကျေးပြီး ဖော်ရွေပါ။ သင်အမှန်တကယ် မည်သူဖြစ်မည်ကို မကြောက်ဘဲ သူတို့နှင့် စကားပြောပါ။ အဆုံးတွင်၊ တတ်နိုင်သမျှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် သင့်အတွက် ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။
မိန်းမနဲ့ ပေါင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ၊ Relationship မှ သင်မျှော်လင့်ထားသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားရမည်။. သူမနှင့် အနာဂတ်ကို မမြင်ပါက သင်၏စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းမှုကို အဆုံးသတ်ပါ၊ သို့သော် နာကျင်မှု သို့မဟုတ် နှစ်သိမ့်မှုဖြင့် သူမနှင့် အတူမနေပါနှင့်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် သင်သည် ၎င်းကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်လိုလျှင် လက်ထပ်ပါ။ အဲဒါ လွယ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ ဘယ်ကို လျှောက်လှမ်းနေလဲ သိချင်ကြပါတယ်။
10. မိန်းမတစ်ယောက် မင်းကို ချစ်မိသွားအောင် ရိုမန်တစ်ဆန်ပါ
အချစ်ရေးဆိုတာ ရူးသွပ်တာမဟုတ်ဘူး။ Romanticism ဟူသည် ရိုင်းစိုင်းသော အပြုအမူများ ရောနှောခြင်း၊ စားသောက်ဆိုင် ဘီလ်ပေးဆောင်ခြင်းကဲ့သို့၊ အံ့သြစရာလေးများနှင့်အတူ သူမအား သင့်ရည်းစားအဖြစ် အခြားသူများထံ မိတ်ဆက်ပေးရန် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ပန်းပေးရသည့် အံ့အားသင့်စရာလေးများ (သူမတကယ်ဆိုလျှင်)။
11. ၎င်းကို သင့်မိသားစုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါ။
သင့်မိသားစုကို သင်ချစ်သောအမျိုးသမီးကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သူမဟာ သင့်ဘဝရဲ့ မိန်းမဖြစ်ကြောင်း သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ သွားလိုက်ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးဖို့ လူတိုင်းအတွက် တရားဝင်နေ့လည်စာ ဒါမှမဟုတ် ညစာ ပြင်ဆင်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ သာ သင်၏အဖော်အဖြစ်ဝတ်ဆင်ပါ။ မိသားစုပြန်ဆုံပွဲ သို့မဟုတ် ပါတီပွဲသို့။ ၎င်းသည် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး လူတိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအတွက် သင်မလုံခြုံသလိုခံစားရမည်မဟုတ်ပေ။ ဒါပေမယ့် အချိန်မရွေး သူမကို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
အောင်မြင်ချင်ရင် မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မိအောင်လုပ်ပါ။သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိ ဤအရည်အသွေးများအားလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည့်ဖြစ်ခြင်းနည်းလမ်းကို မွေးမြူပါ။ သင့်အိမ်မက်ထဲက အမျိုးသမီးက သင်နဲ့ချိန်းတွေ့တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှာမဟုတ်သလို သင့်အနားမှာရှိနေမယ်ဆိုတာကိုလည်း အာမခံပါတယ်။
ဆက်လက်၍ အသိပညာတိုးပွားလိုပါက၊ အွန်လိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ